တောင်သမန်သားလေး: December 2013
Monday, September 03, 2012 ဝင်းကမ္ဘာကျော် 52 comments
Internet Download Manager 6.18 Build 8 Final (Released: Nov 28, 2013)
What's new in version 6.18 build 8 ?
IDM ချည်းပဲ ခဏ ခဏ ရှင်းနေရလို့ New User တွေအတွက် လွယ်တာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....။ ဒီလောက်လွယ်တာတော့ အခြားမှာ မတွေ့ရသေးပါဘူး ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းပါ...:)
(ပထမဆုံး IDM မရှိသေးသူများကတော့ မူရင်းဆိုက်ဒ်ကနေ Update ဖြစ်နေတဲ့ နောက်ဆုံး Version ကို ဒီနေရာကတဆင့် >>> IDM Trial Version <<< ဒေါင်းယူပါ...Next အဆင့်ဆင့်နဲ့ Install လုပ်ပါ... Finish ကိုနှိပ်ပါ... Serial Key တောင်းတဲ့ Box လေးတွေတတ်လာရင် ပိတ်ပစ်ပါ... IDM ကို မ Run ပါနဲ့ဦး Run နေရင် ကွန်ပြူတာရဲ့ ညာဘက်ထောင့်နားက Tray Icon ထဲမှာ IDM Logo လေးပေါ်ကို Right Click > Exit ပေးလိုက်ပါ .....
Download Link Update (29 Nov 2013)
Download IDM New Patch
Gmail ထဲ သူငယ်ချင်းတယောက် အကူညီတောင်းထားလို့ Photoshop CS5 လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဆောဝဲလေးကတော့ portable လေးဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ install စရာမလိုပဲ mouse နဲ့ ၂ ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့ သုံးလို့ရပါပြီ....။ Photoshop ဆို အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်...။အထွေထူး ရှင်းပြစရာမလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်....။ Register
ပြီးသားမို့ ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ full version သုံးရပါပြီ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 165.25MB ပဲ ရှိပါတယ်...။Photoshop လေးနဲ့ ပုံတွေ အလန်းလေးဖြစ်အောင် ဖန်တီးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံး အလွယ် ရယူနိုင်အောင် ဆိုဒ် ပေါ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ လက်ရှိကျနော် သုံနေတဲ့ ဆောဝဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်....။photo ဒီဇိုင်းသမားဆို မရှိမဖြစ်ဆောဝဲလေး ဆို လည်း မမှားပါဘူး...။အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ........။
Adobe Photoshop CS5အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
Facebook က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းလို့ ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ
Adobe Photoshop CS5 အသုံးပြုနည်းအသေးစိပ်ကို
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ ..
Tool တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသုံးပြုပုံအသေးစိပ်ကအစ Effect တွေကို ပေါင်းစပ် အသုံးပြုပုံတွေအဆုံး
Photoshop နည်းပညာတွေကို Pro တစ်ယောက်
အဆင့်လောက်အထိ ကျွမ်းကျင်မှုရှိလာအောင် စေ့စေ့စပ်စပ် ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး
ဒါ့အပြင် Photoshop CS5ကို အသုံးပြုပြီး Website ဒီဇိုင်းတွေ ရေးစွဲနည်းကိုပါ
လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒီမှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Posted by lin linn at 12:17 AM
Windows 8 တွင် Myanmar Fonts အမှန်ပေါ်ချင်သူများအတွက်
Posted by my blog on Jul 17, 2013 0
ကျွန်တော်တို့ အခုနောက်ပိုင်း Windwos 8 Preview Version ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း အများစု Windows 8 ကို စမ်းပြီး အသုံးပြုလာတာ တွေ့ရပါတယ်.. ဒီနေရာမှာ ဘာတွေ ပြသနာကြုံ နေရလဲဆိုတော့ အခုအသစ် ထွက်လာတဲ့ Windows 8 မှာ Myanmar text ဆိုပြီးတော့ Unicode ကို Support လုပ်ပေးထားပါတယ် .. အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Unicode ကိုပဲအသုံးပြုနေတယ် ဆိုရင်တော့ ပြသနာမရှိပါဘူး .. ဒါပေမယ့် အများစုက ဇော်ဂျီဝမ်း ကိုသာ အသုံးပြုနေတဲ့ အချိန်မှာ Folder Rename ကို Zawgyi-One နဲ့ပေးထားလို့ Windows 8 မှာ ဖောင့်တွေ ပြောင်းပြန်တွေ ပေါ်နေတာတွေ G-Talk ပြောတဲ့ အခါမှာ မြန်မာလို ပေါ်ပေမယ့် ဖောင့်တွေက တစ်လွဲတွေ ဖြစ်နေတာကို ကျွန်တော် Keymagic သုံးပြီး ဖြေရှင်းလို့ ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကို ရေးပေးသွားပါမယ်.
Download KeyMagic Here
အားလုံးဒေါင်းလော့ချပြီးရင် Microsoft က ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ Package လေးကို အရင် Install လုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးမှ Keymagic ကို Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော် တစ်ချက်ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့တာက Zawgyi-One ဖောင့်ကို Install လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း အရင် Windows7မှာတုန်းက အတိုင်းပါပဲ ဘာမှမထူးပါဘူး .. Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ Myanmar Text ရော Zawgyi-One နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ .. Keymagic ကို အသုံးပြုရတာ လွယ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့က Zawgyi-One ကိုအသုံးပြုမယ် ဆိုရင် အရင် Windows7က အတိုင်းအသုံးပြုယုံပါပဲ .. Keymagic နဲ့ Unicode Font ကိုပြောင်းသုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Keyboard မှ Shift + Ctrl + Z ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ က Keyboard မှ Zawgyi-One လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်နေပေမယ့်လည်း စာလုံးတွေက Unicode ဖောင်နဲ့အလိုလိုပြောင်း သွားပါလိမ့်မယ် .. Convert လုပ်ပေးတာပါ .. ဒါဆိုရင်တော့ လက်ကွက်အတွက် အဆင်ပြေသွား ပြီလို့ထင်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်တို့ ဖိုဒါတွေမှာ မြန်မာလို Zawgyi-One ဖောင်နဲ့ မပေါ်တော့ တာတွေအတွက် အရင် Windows7တုန်းကလို Font ကိုသွားချိန်း ပေးလို့မရပါဘူး .. အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာတစ်ခုက Zawgyi -One ဖောင့်နဲ့ Rename ပေးထားတာတွေကို Keymagic သုံးပြီး Myanmar Text နဲ့ပြန်ပြီး rename ပေးမှသာ Folder တွေမှာ မြန်မာဖောင့် ပေါ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
နောက်တစ်ချက်ကတော့ G-Talk သုံးတဲ့အခါမှာ Myanmar လိုပေါ်နေသော်လည်း Font တွေက ထုံးစံအတိုင်း တလွဲတွေပေါ်နေ ပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့က G-Talk က Setting ထဲမှာ Zawgyi-One ဖောင့်ကိုသွားပြီး ပြောင်းပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် ..
Ref & Credit => http://www.mmithelper.com/2013/05/windows-8-myanmar-fonts.html
Posted by lin linn at 4:34 PM
မြန်မာ Font အဆင်မပြေသူများအတွက် ….
6/20/2012 01:21:00 AM Sa U Thu No comments
Posted by lin linn at 4:22 PM
၀၁။ ဖက်ပစ်လိုက် နမ်းပစ်လိုက် – ဟဲလေး
၀၂။ တွေ့ဖူးတယ်ကလေးလိုလျှောက်မဖွနဲ့ – Waiလျှံ
၀၃။ သင်္ကြန်ညချမ်း – ယံယံ
၀၄။ အချိန်တွေကုန်တာမြန်လွန်းတယ် – ဆိုင်းနော်
၀၅။ မပျော်နိုင်ဘူး – အစ္စဏီ
၀၆။ ပိတောက်မကြိုက်တော့ဘူး – ဒီးဒီး
၀၇။ Let’s go tonight – Dယံ၊ ခန့်ဇော်
၀၈။ အတူကဲကြစို့ကွာ – ဒီရေတိုး၊ ဆူးလေး
၀၉။ ဖြည်းဖြည်းလောင်းပါ – အိမ့်ချစ်
၁၀။ မလွယ်ဘူးအထာရှိတယ် – စစ်သွေး၊ Waiလျှံ
၁၁။ အမှတ်တရသင်္ကြန် – N ကိုင်ရာ
၁၂။ ရေမီးစုံ လေထီးခုန် – သြရသ
၁၃။ မငြင်းနဲ့တော့ – မှူးရတနာ
၁၄။ ရောင်စုံကာလာ – ဟဲလေး၊ ပင်းပင်း
၁၅။ ရင်ခုန်သံကကြိုး – စွဲလမ်းဖြူ
၁၆။ သင်္ကြန် Party – သားလေး
၁၇။ သီချင်းနဲ့ပျော် – မတြာ
၁၈။ သင်္ကြန်ရှုခင်း – မေဟင်္သာ
[Download Whole Album]
++++++ ဒီနေရာမှ သမလာပါသည်++++++
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးလို့ရပါတယ်နော် အဆင်ပြေပါစေ
ဒေါင်းရန် .. ဒီမှာ ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးဝင်ရောက်ဒေါင်းယူပါ
ဒီနေရာမှ မျှ ဝေပါသည်...
Photoshop CS5 Full Registed (Portable) Gmail ထဲ ...
Adobe Photoshop CS5အသုံးပြုနည်းစာအုပ်Facebook က ...
မြန်မာ Font အဆင်မပြေသူများအတွက် ….6/20/2012 01:21:...
VA – Summer2သင်္ကြန်သီချင်းများ (၂၀၁၃) [Album] ၀၁...
Portable Adobe Photoshop CS4 Special Edition ကဲတေ...